Xaawa Cabdi: Waa Tumaa, Maxayse Ahayd Shaqadeeda? | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Aasaaska Ilaha Dakhliga iyo Dhaqaala-Abuurka ee Ururka Al-Shabaab
Cabdifataax Xasan Maxamed 'Barawaani', September 10, 2020
Dagaalka Ganacsi ee Maraykan iyo China!
Bukhaari Xirsi Faarax, September 9, 2020
Daahirada Diin Ka Bixidda ee Bariga Dhexe iyo Geeska Afrika
Cabdifataax Xasan Maxamed 'Barawaani', August 29, 2020
Kaarboonka iyo Isku –dhisyadiisa
Maxamed Xirsi Faarax, September 16, 2020
Xeerka Isa soo-jiidasho ee Lamaanaha!!!
Bukhaari Xirsi Faarax, September 15, 2020
“لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ” – Waa qayb kamid ah aayad kursiga oo ah aayada 255-aad ee suurada Al-baqra.
Dowlada Jarmalka oo amartay in Shirkada Volkswagen ay dib u soo celiso inkabadan labo Malyan oo baabuur
Cabdijabaar Sh. Axmed, October 17, 2015
Abaalkii ugu Quruxda Badnaa oo Ay Laba Wiil oo Saaxiibo Ahaa Isku Galeen!
Suldaan Nayruus, November 24, 2018
Xirfada Saxaafada: Qoridda Warbixinada
BBC Akademi, May 9, 2018
Kaamiro Cusub oo Lagu Ogaan Karo in Qofka Faraxsanyahay Ama Halis Yahay!
BBC Somali, July 17, 2018
Wax Kabaro Qisooyinka Diiniga ah
Ayaanle Cabdi, February 19, 2016
Faallo Buugga: HALBEEG, Hirdanka Fikradaha iyo Habraaca Fahanka
Mustafe Cabdillaahi Cismaan, November 16, 2019
Miski Cabdinuur Salal, August 28, 2019
Xaawa Cabdi: Waa Tumaa, Maxayse Ahayd Shaqadeeda?
Afrikaan.so — August 5, 2020
Dr. Xaawa Cabdi Dhiblaawe, waxay ahayd Soomaali u ololeyneysay xuquuqda dadka, qareen, iyo dhakhtar. Waa aasaasaha Xarunta Caafimaad ee Hooyada iyo Dhallaanka iyo hay’adda Doctor Xawa Cabdi Foundation.
Sannadkii 2010-kii, waxaa loo magacaabay Abaalmarinta Glamour ee Haweeneyda Sannadka. Sidoo kale waxay mar ka mid noqotay dadka loo soo magacaabay abaalmarinta nabadda ee Nobel Peace Prize.
Alle ha u naxariiste, Dr. Xaawa Cabdi Dhiblaawe ayaa ku geeriyootay magaalada Muqdisho. Waxay ahayd aasaasaha hay’ad ka shaqeysa arrimaha gargaarka. Xaawa cabdi ayaa dhashay seddax carruur ah, oo mid ka mid ah uu dhintay sannadkii 2005. Waxay ku dhalatay magaalada Muqdisho, 17 bishii May sanadkii 1947. Waxbarashadeeda dugsiga hoose waxay ku qaadatay iskoolka Xamar Jajab ee magaalada Muqdisho, halka dugsiga dhexena ay kaga baxday iskoolka Komarshaale.
Iskool dowladdii Ruushka ay ka dhistay magaalada Muqdisho ayay sheegtay in wixii intaa ka dambeeyay ay ku biirtay, ka dibna ay ka heshay deeq waxbarasho oo ay bixiyeen midowgii Soviet oo ay ku tagtay dalka Ukraine, waxayan ku maqneyd muddo 7 sano ah.
Drs Xaawa Cabdi oo hawlaha samafalka bulshada ku soo jirtay tan iyo berigii dagaalada sokeyee somalia ayaa xarun caafimad oo ay ka faaiideystaan hooyada iyo dhallaanka waxay ka furtay jidka Muqdisho iyo Afgooye u dhexeeya oo hadda loo bixiyey degaanka Hawa Cabdi.
Waxay dib ugu laabtay dalka, snnadkii 1972-dii, ka dib waxay shaqo ka bilowday isbitaalka Digfeer. Guud ahaan xilligaas waxaa dalka ku yara haweenka bartay caafimmadka. Dr. Xawa Cabdi waxay si gaar ah ugu taqasustay cudurada Hooyada iyo dhallaanka.
Jamacadii ummadda Soomalaiyeed qeybta caafimmadka ayay sidoo kale ka noqotay bare (macallim).
Xaawa Cabdi oo dhakhtar ahayd muddo 49 sano ah, ayaa caafimmaadka baratay sannadkii 1971-dii, xilligaas oo ay dalka ka jirtay dowladdii dhexe. Waxaa ay ka soo shaqeysay xarumo caafimmaad oo ku yaala magaalada Muqdisho, waxayna sheegtay in ardaydii ay wax soo bartay ay haatan ka shaqeeyaan deegannada Soomaalida iyo dalal badan oo caalamka.
2017 – Waxay ka mid ahayd 10-kii qof ee Jaamacadda Havard ay siisay shahaadada abaalmarinta ah Doctor of Laws
2015 – Abaalmarinta Horumarinta Nabadda ee Pilosio ayey ku guuleysatay
2014 – Xawa Cabdi waxay heshay Biladda Xoriyadda ee Roosevelt Four: Abaalmarinta oo lagu siiyay Middelburg, ee Netherlands waxaa loogu yeeraa Freedom from Want.
2012 – Xawa Cabdi waxaa loo magacaabay abaalmarinta Nobel Peace Prize.
2012 – Waxay heshay Abaalmarinta Dumarka Saameynta leh ee Hay’adda WITW Foundation; Abaalmarinta Arrimaha Gargaarka Bulshada ee Bet iyo Abaalmarinta Cadaaladda ee John Jay.
Xaawa Cabdi oo hawlaha samafalka bulshada ku soo jirtay tan iyo bilowgii dagaalada sokeye ee Soomaaliya, ayaa xarun caafimad oo ay ka faa’iideystaan hooyada iyo dhallaanka, ka furtay waddada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye.
Waxay Xaawo Cabdi qortay buugg cajiib leh oo ay ku jiraan sheekooyin xiiso badan. Waa khabiir ku takhasusay Ob/Gyn oo kuna dhalatay Soomaaliya. Waxay aadey dugsiga caafimaadka ee midowga Soofiyeeti, ka dibna iskuul sharci ah. Waxay ku laabatay Soomaaliya si ay u dhisto xarun caafimaad oo ay ku daryeesho kumanaanka kun oo ku nool waddankeeda.
Waxay ka mid ahayd dumarkii ugu horreeyay ee soo bartay daweynta cudurada haweenka ee gynecologist, waxayna 1983-dii furatay isbitaal hal qol ka koobnaa si ay ugu caawiso haweenka uurka leh.
“Isbitaalka waxaan ku bilaabay hal qol annigoo ugu daneynayay haqeenka foosha ay hayso, balse markii dambe wuu weynaaday oo wuxuu gaaray illaa afar boqol oo sariirood”, ayay Dr. Xaawa ku sheegtay wareysi ahaa sannadkii 2013-kii.
Xaawa Cabdi Dhiblawe waxay u dhaqdhaqaaqi jirtay xuquuqda aadanaha iyo dhaqaatiirta Soomaaliyeed. Waa aasaasaha iyo guddoomiyaha ururka Dr. Xaawo Cabdi Foundation, oo ah urur aan macaash doon ahayn.
Markii uu bilowday dagaalkii sokeeye ee Soomaaliya, 1991, xarunteeda waxaa buux dhaafiyay dad ka cararayay colaadda, ka dibna waxay bilowday hay’addeeda DHAF si dadka ay u caawiso.
Hadda DHAF waxay ka kooban tahay isbitaal, iskuul iyo xarunta quudinta. Waxay bixisaa aqoon, daryeel caafimaad iyo hoy iyo tababaro la siiyo dadka barakacay ee u badan haween iyo carruur.
Dadkii ka hadlay geerideeda waxaa ka mid ah ra’iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya, Xassan Cali Khayre, oo sheegay in Dr Xaawa Cabdi lagu xusuusan doona kaalintii ay ka geysatay badbaadada ummaddeena, gaar ahaan kuwa nugul.
Sidoo kale hogaamiyaha xisbiga Wadajir, Cabdiraxmana Cabdishakuur ayaa Xaawa ku tilmaamay “daljir daahsoonaa”.
“Dr. Xaawa waxay ahayd samafale bulshada si naf-hur leh, xili adag uga soo shaqeysay. Waxay tusaale u tahay daljirka dahsoon ee danta guud ka shaqeeya, iyagoo Alle oo keli ah abaal iyo ajar ka doonaya. Allaha u naxariisto, sabar iyo iimaanna Allaha ka siiyo eheladeedii iyo ummada Soomaaliyeed oo idil”, ayuu yiri.
Waxaa sidoo kale tacsiyadeen iyo dhiirogelin amaan leh oo barta baraha bulshada soo dhigay guddoomiyaha Xisbiga Qaransoor, Cabdijabaar Sh. Axmed ““Jannada Illaahay haka waraabiyo.” Dr. Xaawo Cabdi waxay tusaalle fiican u tahay dad badan oo ay dumarka ka koow yihiin. Qofwalbo oo waxtar leh sidaas ayay u xusuusan doontaa bulshada iyo madaxdeedaba. Dhalinyarooy hurdada ka kaca oo dalkiina u istaaga, yuusan ku matalin qof qabiil kusoo gambanaayo.”
Xaawo Cabdi xarunteedii caafimadka waxaa ku booqday madaxeynihii hore ee Mareykanka George H. W. Bus, xilligii ciidamada Mareykanka ay ku sugnaayeen Soomaaliya, bilowgii 1990-maadki.
Bashiir Maxamed Caato & Afrikaan.so
Tags: Maxayse Ahayd Shaqadeeda?
Next post Sebenkan Maanta Aynu Joogno Dhalinyarada iyo Jiilasha Haatan soo Kacaamaya
Previous post "Dhagaha Ayaan ku Beelay Qaraxyadii Waaweynaa ee Beirut"
About the Author Afrikaan.so
Afrikaan.so – “waa codka xorriyadda iyo la daggaalanka bey’ad uu qof kaligii ka taliyo ama la xariira dadka aaminsan si fikradahooda jira loo xoojiyo fikradaha kale ee aan loo qaddarin.” Sidoo kale, Afrikaan.so waa deggel u taagan in qoraalku noqdo mid qiimo leh, in aragtiyada iyo xal u helida dhibaatada bulshadeena lagu lafa-guro. Sida ka muuqato sumada websaydkeena waxaad ka helaysaa dhammaan cilmiga noocyadiisa kala duwan ee lagu baahiyey. Waxaa guud ahaan aqoonyahanada iyo qorayaasha ku boggaadineynaa siddii ay dalkooda dhaxal ugu reebi lahaayeen ugana soo saari laheeyeen dal dhaafsan dalalka caalamka, iyadoo loo maraayo aragtida ah ‘Xalka waa xaggee?’” Afrikaan.so waxaa ka go’an inay abuurto bulsho hal abuur fiican leh, inay saldhig u noqoto xalka caqabadaha & qaran ahaan loo aqoonsan yahay adeeg xirfadeed.